कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको समुदायबाट संकलन गरिएको १३३ नमूना स्वाबमध्ये मंगलवार ५ जनाको पीसीआर रिपोर्ट ‘पोजेटिभ’ आयो । संक्रमण देखिएका सबै समुदायबाट संकलन गरिएको नमूना बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा परीक्षण गरिएको थियो ।
संक्रमितहरू कृष्णनगर–२ का २१ र २५ वर्षीय युवा, वडा नम्बर ८ का १२ र ६ वर्षीय बालक र वडा नम्बर ११ का ४० वर्षीय पुरुष हुन् । संक्रमितको कुनै यात्रा विवरण छैन । संक्रमितको स्वाब ‘रेन्डम स्याम्पलिङ मेथड’द्वारा संकलन गरिएको थियो ।
गत आइतवार बुटवलको हाटबजार लाइनस्थित शपिङ कम्पलेक्समा व्यापार गर्ने २ जनामा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखियो । आइसोलेसनमा राख्न खोज्दा संक्रमण पुष्टि भएकाहरू लुके । संक्रमितलाई प्रशासनले हालसम्म भेट्टाउन सकेको छैन । संक्रमित समुदायमै लुकेपछि रूपन्देहीमा त्रास बढेको छ । भारतीय बजार नौतुनवा घर भएका ती २ व्यापारी लकडाउनमा कसरी नेपाल आए भन्नेबारे प्रशासन समेत बेखबर छ ।
लकडाउन हुँदा समेत ती व्यक्तिहरूले गाडी लिएर बुटवल आवतजावत गर्ने गरेको हाटबजार व्यवसायी संघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष भीमलाल ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई नगरपालिकाले कडाइ गर्थ्यो तर उनीहरू वैशाख तेस्रो हप्ता कोरोनाका बिरामी धेरै नभेटिँदासम्म उनीहरू आवतजावत गरिरहन्थे । सीमा सिल थियो कसरी आउँथे कसरी जान्थे ? हामी अचम्ममा पर्थ्यौं ।’
मंगलवार नै रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकास्थित खैरेनीमा रहेको गरिमा विकास बैंकका एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखियो । रुघाखोकी र ज्वरो आएपछि बिदामा बसेकी उनलाई शंका लागेर पीसीआर जाँच गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको नगर प्रमुख खत्रीले बताए ।
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका २२ वर्षीय युवामा पनि शंका लागेर जाँच गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी विष्णु गौतमले बताए ।
यी हुन् समुदायमै रहेका बेला फेला परेका केही कोरोना संक्रमितहरू । लकडाउन अन्त्य हुनुअघि कोरोना संक्रमित बिरामी घट्दै गएकोमा पछिल्लो समय त्यो संख्या पुनः पुरानै लयमा फर्किएको छ । पछिल्लो समय लक्षण सहितका बिरामी देखा पर्न थालेका छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक डा. सागर न्यौपाने अहिलेको भीडभाडले अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘समुदायमा अहिले लक्षण सहितका बिरामी देखिन थालेका छन् । अब कन्ट्रोल नगर्ने हो भने अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान्छ । नेपालको हालत युरोपको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।’
लकडाउन अन्त्यसँगै खासगरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण बढेको छ । भारतबाट बेपर्वाह नेपाल आवतजावत बढेको छ । मंगलवार नेपाल–भारत सुनौली नाकाबाट २२७ जना नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियामा इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी भट्टराईले बाहिर हल्ला आएजस्तो सीमा खुला नभएको बताए । ‘लकडाउन शुरू हुँदादेखि हालसम्म नै उस्तै कडाइ छ । भन्सारका केही कर्मचारीहरू परिचयपत्र बनाएर नेपाली भन्सारमा आए पनि अन्य सबै नेपाल आउनेहरूको नाम र रेकर्ड हामीसँग छ । खुला सिमानामा लुकीछिपी छिर्छन् अनि कहाँबाट आइस् भनेर सोधपुछ गर्दा सुनौली भन्ने गरेर बदनाम गराइन्छ ।’
भारतबाट सीमा नाका हुँदै नेपाल आउने नेपालीलाई नाकाबाट नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टरमा राख्छ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लामा सम्पर्क गरी पठाउने गरिएको छ ।